စင်္ကာပူပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) ဖွဲ့စည်းခြင်း
တစ်ဦးကစင်္ကာပူပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) နိုင်ငံခြားသားများကို set up နိုငျသောငါးကွဲပြားခြားနားသောဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများ၏လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ PLC က၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့်သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ခြင်းစဉ်ရှယ်ယာများကန့်အသတ်တစ်ခုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များအဘို့အလီမိတက်တာဝန်ယူမှုကိုအခြားအကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
1994 ၏စင်္ကာပူကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေအားလုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှု, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဖျက်သိမ်းအုပ်ချုပ်။
နိုင်ငံခြားသားများစုစုပေါင်းကုမ္ပဏီရှယ်ယာ 100% ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
စင်္ကာပူသမ္မတနိုင်ငံအရှေ့တောင်အာရှတွင်မလေးရှားနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံအကြားတည်ရှိကာကျွန်းများအုပ်စုတစ်စုဖြစ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူကလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်အခါ 1959 သည်အထိမလေးရှားများ၏အဖွဲ့ချုပ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးသည့်အခါ 1965 သည်အထိဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သည်။
စင်္ကာပူ၏စီးပွားရေးကိုအစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားလာဘဏ္ဍာရေးစနစ်များကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ကုန်သွယ်ရေး, ရေကြောင်း, နည်းပညာမြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုအပေါ်မှာအခြေခံအနေနဲ့စီးပွားရေးကိုနှင့်အတူအရှေ့တောင်အာရှရှိတစ်ဦးက key ကိုစီးပွားရေးစင်တာ။
တစ်ဦးကစင်္ကာပူပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်:
• နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ရှင်များ: တစ်ဦး PLC သည်ရှယ်ယာနိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
• အနိမ့်အခွန်: ပထမဦးဆုံးအ3နှစ်ကြီးမားသောအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက်: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခွန်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းနှင့်အခြားသူများကိုသူတို့အစိုးရတွေကအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရပါမည်။
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: ရှယ်ယာရှင်များ '' liabilities သူတို့ရဲ့ရှယ်ယာမြို့တော်ပံ့ပိုးမှုများကိုဖို့ကန့်သတ်ထားပါသည်။
• အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်: အဘယ်သူမျှမလိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်သို့မဟုတ်ရှယ်ယာမြို့တော်ရှိပါသည်။
• အဘယ်သူမျှမစာရင်းစစ်: စာရင်းစစ်အသေးစားကုမ္ပဏီများအတွက်မလိုအပ်ပါ။
• အင်္ဂလိပ်: စင်္ကာပူက၎င်း၏အရာရှိတဦးကဘာသာစကားများတစ်ဦးအဖြစ်အင်္ဂလိပ်နှင့်အတူဟောင်းတစ်ဦးကဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်ပါတယ်။
• အာရှ Access ကို: စင်္ကာပူပိုကောင်းဒေသဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများအတွက်အရှေ့တောင်အာရှတစ်တံခါးပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။
စင်္ကာပူပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) အမည်
တိုင်း PLC တူညီသောသို့မဟုတ်ရှိပြီးသားစင်္ကာပူဥပဒေရေးရာ entity ရဲ့နာမတော်လည်းအလားတူမထူးခြားတဲ့ကုမ္ပဏီအမည်ကိုရွေးချယ်ရမည်။
PLC ရဲ့ကုမ္ပဏီအမည်စကားလုံးများကို "ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်" သို့မဟုတ် "Pte.Ltd" ၏ယင်း၏အတိုကောက်နှင့်အတူအဆုံးသတ်ရပေမည်။
တိုင်းအသစ်ကကုမ္ပဏီစာရင်းကိုင် & ကော်ပိုရိတ်စည်းမျဉ်းအာဏာပိုင် (ACRA) နဲ့မှတျပုံတငျရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များနှင့်ရှင်းလင်းစွာထူထောင်၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အခွင့်အရေးများနှင့်အတူကုမ္ပဏီအကြားဆက်ဆံရေး defining တစ်ဦးလက်မှတ်ရေးထိုးရှယ်ယာရှင်များမှာ '' သဘောတူညီချက် File ။ အဆိုပါအကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်တွေသူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သူတို့၏ "ထိန်းချုပ်အခွင့်အရေး 'ပါဝင်သည်သငျ့သညျ။
အနည်းဆုံးတဦးတည်းရှယ်ယာကနဦးစာရင်းသွင်းသူထုတ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ရန်ရန်, ကုမ္ပဏီ (မည်သည့်နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်တူညီသော) $ 1 စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန်၏မြို့တော်ထ paid နိမ့်ဆုံးရှိရမည်။
ခွင့်ပြုချက်အပေါ်မှာ၎င်း, ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ရရှိ. မှတ်ပုံတင်ခံအဖြစ်ကုမ္ပဏီသတ်မှတ်သည့်ထူးခြားသော Entity နံပါတ် (UEM) ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏အမည်, မှတ်ပုံတင်နံပါတ်, ဆွဲသွင်းပါဝင်၏ရက်စွဲ, ကနဦးအစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် ပတ်သက်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအမျိုးအစားများ, မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာ, တက် paid မြို့တော်ပမာဏနှင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: အပြင်, တစ်ဦးကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပရိုဖိုင်းကိုလည်းပါဝင်သည်သောမှတ်ပုံတင်ကပြင်ဆင်လျက်ရှိသည် , ဒါရိုက်တာများနှင့်အတွင်းရေးမှူး။ ဤသည် profile ကိုအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မှတ်ပုံတင်အများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်သောကုမ္ပဏီ၏အမည်, ဆွဲသွင်းပါဝင်၏နေ့စွဲနှင့်ကနဦးအစုရှယ်ယာရှင်များပါဝင်သောပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏လက်မှတ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလက်မှတ်ကိုဆွဲသွင်းပါဝင်, မှတ်ပုံတင်နှင့်ကနဦးအစုရှယ်ယာရှင်များမှထုတ်ပေးရှယ်ယာအရေအတွက်ကသက်သေပြပေးပါသည်။
အဆိုပါစာချွန်လွှာနှင့်အသင်းဆောင်းပါးများ (maa) စသည်တို့ကိုကုမ္ပဏီရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များ၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီအမည်ကိုအဖြစ်မှတ်ပုံတင်များအတွက်လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်, မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာ, ကိုဖော်ပြထားတယ်အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများကုမ္ပဏီ၏ပြည်တွင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဖော်ပြထားတယ်နှင့်မန်နေဂျာများလိုက်နာရမည်အုပျခြုပျ သည်။
အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များ၏တာဝန်ယူမှုကိုသူတို့ရဲ့ရှယ်ယာမြို့တော်ပံ့ပိုးမှုများကိုကန့်သတ်ထားသည်။ သူတို့ရဲ့အစုရှယ်ယာအပြည့်အဝပေးဆောင်ကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ထိုငွေပမာဏကိုကုမ္ပဏီအကြွေးတွေသို့မဟုတ်တရားစွဲဆိုမှုတရားစီရင်ပိုင်ဆပ်ဖို့ကုမ္ပဏီ၏အကြွေးခြင်းဖြင့်ဆည်းကပ်နိုင်ပါတယ်။
တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်သာနိမ့်ဆုံးတစ်ဦး PLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များမဆိုတိုင်းပြည်နှင့်နိုင်ငံသားများအတွက်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ ရှယ်ယာရှင်များကသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်နိုင်သည်။ 100% နိုင်ငံခြားရှယ်ယာရှင်များခွင့်ပြုထားသည်။ PLC ရဲ့တစ်ခုတည်းသော 50 ရှယ်ယာရှင်များဦးရေအများဆုံးရှိနိုင်ပါသည်။
တိုင်း PLC Enterprises ၏စင်္ကာပူမှတ်ပုံတင်မည်များအတွက်ရှယ်ယာရှင်များမှာတစ်မှတ်ပုံတင်မည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့် file ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးတည်းသာညွှန်ကြားရေးမှူးကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်အနည်းဆုံးနေထိုင်သူ (ဒေသခံ) ညွှန်ကြားရေးမှူးအဲဒီမှာဖြစ်ရမည်။
PLC ရဲ့ Enterprises ၏စင်္ကာပူမှတ်ပုံတင်မည်များအတွက်ဒါရိုက်တာတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်မည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့် file ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးကကုမ္ပဏီ၏အတွင်းရေးမှူးမှတ်ပုံတင်6လအတွင်းခနျ့အပျထားရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးစည်းမျဉ်းလိုက်နာမှုထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်တာဝန်ရှိသည်။ စင်္ကာပူကဤအနေအထားများအတွက်ရရှိနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးန်ဆောင်မှုကော်ပိုရေးရှင်းရှိပါတယ်။
တိုင်း PLC စင်္ကာပူမှာနေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုံးလိပ်စာထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ဒေသခံညွှန်ကြားရေးမှူးသို့မဟုတ်အတွင်းရေးမှူး၏ဖြစ်နိုင်သည်။ စာတိုက်သေတ္တာများခွင့်ပြုမထားပေ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, PLC ရဲ့လျှို့ဝှက်နှင့်အစိုးရနဲ့အတူတင်သွင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ကြသမျှသောအကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်သူဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ကိုခနျ့အပျရမယျ။
အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်ရှိပါသည်။ သို့သော်ရှယ်ယာမြို့တော်အထိပေးဆောင်နဦးမှာအနည်းဆုံး $ 1 စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန်ဖြစ်ရပါမည်။
တိုင်း PLC မှတ်ပုံတင်ရေးထံမှ3လအတွင်းတစ်ခုစာရင်းစစ်ကိုခနျ့အပျရမယျ။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သော 20 ရှယ်ယာရှင်များထက်နည်းပါးလာခြင်းနှင့်နှစ်စဉ်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ထက်နည်း $5သန်းစင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန်နှင့်အတူကုမ္ပဏီများသည်အတိုင်းဤလိုအပ်ချက်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရှိပါတယ်။
PLC ရဲ့က၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေးကြေညာချက်ကိုနောက်ဆုံးဘဏ္ဍာရေးနှစ်များအတွက်အတည်ပြုသည်အဘယ်မှာရှိနှစ်စဉ်ယေဘုယျရှယ်ယာရှင်များ '' အစည်းအဝေးများကျင်းပရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
PLC ရဲ့င်း၏နောက်ဆုံးနှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျအစည်းအဝေးကနေတစ်လအတွင်းနှစ်စဉ်ပြန်လာ file ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးကကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တိုင်းဒီဇင်ဘာလ 31st ဖြစ်သို့မဟုတ်ယင်း၏ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်ရက်စွဲ၏ 365 ရက်အတွင်းနိုင်ပါတယ်။
လောလောဆယ်အသစ် PLC ရဲ့ပထမဦးဆုံး 100,000 နှစ်ဆက်တိုက်၎င်း၏ပထမဆုံး $3စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန်ဝင်ငွေအပေါ်တစ်ဦးအပြည့်အဝအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုရရှိတက်ကိုစတင်ပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, စတင်ကိုလည်းလာမယ့် $ 50 စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန်ဝင်ငွေအပေါ်တစ်ဦး 200,000% ကင်းလွတ်ခွင့်ရတာကိုနှစ်သက်ကြတယ်။
ကော်ပိုရိတ်ဝင်ငွေအခွန်ပြန်တိုင်းနိုဝင်ဘာလ 30th အားဖြင့်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကအစီရင်ခံစာနှင့်အခွန် computing ပါဝင်သည်။
လက်ရှိအခွန်ကော်ပိုရိတ်နှုန်းမှာနှစ်စဉ်အမြတ်အစွန်းအပေါ် 17% ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအပြည့်အဝတစ် PLC ထည့်သွင်းဖို့ 15 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းအထိကြာနိုင်ပါတယ်။
100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, အနိမ့်အခွန်များ, အရှေ့တောင်အာရှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများကိုရယူသုံးစွဲနိုင်မျှနိမ့်ဆုံးမြို့တော်မျှလိုအပ်တဲ့စာရင်းစစ်များနှင့်အင်္ဂလိပ်ယင်း၏အရာရှိတဦးကဘာသာစကားများတစ်ခုဖြစ်သည်: တစ်ဦးကစင်္ကာပူပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) ဤအကြိုးကြေးဇူးမြား၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။